मोर्गन इंग्ल्याण्ड क्रिकेट टिमको कप्तानबाट हट्ने ! - Everest Dainik - News from Nepal
मोर्गन इंग्ल्याण्ड क्रिकेट टिमको कप्तानबाट हट्ने !
काठमाडौंः इंग्ल्याण्ड क्रिकेट टिमका कप्तान इओन मोर्गनले कप्तानबाट राजीनामा दिने सम्भावना बढेको छ ।
हालै इंग्ल्याण्ड र वेल्समा सम्पन्न एकदिवसीय विश्वकप जिताएका मोर्गनले वान डे क्रिकेट टिमको कप्तानबाट राजीनामा दिने सम्भावना बढेको हो ।
पूर्णरुपमा उनी फिट नभएकाले वान डे क्रिकेट टिमको कप्तानबाट मोर्गनले राजनीमा दिनसक्ने बताइएको छ । तर उनले टि–२० क्रिकेट टिमको भने कप्तानी गर्नेछन् ।
याे पनि पढ्नुस इंग्ल्याण्डका क्रिकेटरलाई फुबटल खेल्न बन्देज
मोर्गन विश्वकपका क्रममा घाइते भएका थिए । त्यसपछि उनी इंग्ल्याण्डले खेलिरहेका सिरिजमा अटाउन सकेका छैनन् ।
यद्यपि मोर्गन इंग्ल्याण्डमै भइरहेको ब्लास्ट टि–२० लिग भने खेलिरहेका छन् । अब यदि मोर्गन पूर्णरुपमा फिट भएमा टि–२० क्रिकेट टिमको नेतृत्व गर्ने छन् ।
याे पनि पढ्नुस आइपीएल अक्सनः मोर्गन साढे ५ करोडमा बिक्री
मोर्गनलाई वान डे टि–२० क्रिकेट टिमको नेतृत्व गर्ने जिम्मा पाएका थिए । टेस्ट क्रिकेट टिममा भने जो रुटले कप्तानी गर्दै आएका छन् ।
ट्याग्स: इओन मोर्गन, इंग्ल्याण्ड क्रिकेट टिम